TRUESTORY: တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ NLD ရုံးများအား မြို့နယ်အလိုက် သံဃာများဦးဆောင်ကာ လူထုတစ်ရပ်လုံးဆန္ဒပြမည်
NLD ဗဟိုကော်မတီဝင် ဦးထင်လင်းဦးမှ ဟောပြောပွဲတစ်ခုတွင် "ကုလားမုန်းရင် ဘုရားလဲ မကိုးကွယ်နဲ့ ဘုရားလဲ ကုလားပဲ" ၊ "သတ္တ၀ါ အားလုံးကျန်းမာပါစေ ကုလားမပါ ဆိုပြီးမေတ္တာပို့လို့ရမလား" ၊ "ကုလားပါမေတ္တာမပို့ရင်တော့ ဗုဒ္ဒဘာသာဆိုတာ မိစ္ဆာ၀ါဒီပဲ" ၊ "သာကီမျိုးဆိုတာ အစ်မကြီးအမ်ိအရာထား အစ်ကိုကြီးအဖရာထားပြီးတော့ မောင်ကို နှမယူ အစ်မကို မောင်ကယူ အဲဒါကိုသာကီမျိးလို့ခေါ်တယ်" ၊ "အဲဒါကိုမှ ဘုန်းကြီးတစ်းပါးကနေ ငါတို့ကသာကီမျိုးကွလို့ လာပြောရင် "မင်းနဲ့ငါ ကတုံးနဲ့ ဆံပင်ပဲ ကွာတယ်လို့ အဲ့ဘုန်းကြီးကို ပြန်ပြောလိုက်" ဟူ၍ ရိုင်းစိုင်းစွာ စော်ကားပြောဆိုခဲ့သည်။
မုံရွာမြို့မှ သံဃာတစ်ပါးမှလည်း များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်းနှင့် ဆရာတော်ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ကန့်ကွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မိန့်သည်။
NLD ၏ ပြောဆိုရပ်တည်မှုများက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို သွေးထိုးသလိုဖြစ်နေပြီး အဓိကရုဏ်းများ ဖြစ်ပွားအောင် လုပ်သလိုဖြစ်နေကြောင်းကို မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင်ကွန်ယက်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ ယခုလိုပြောခဲ့သည်။ “ကိုထင်လင်းဦးပြောတာတွေက တည်ငြိမ်နေတဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေကို ပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်သလို ဖြစ်နေတယ်…. အခါဟာက ဘယ်သူကမှ ဘာမှမပြောတော့ဘူးလေ…. ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူလက်တွဲဖို့ရည်ရွယ်တယ်ဆိုရင် အခုလို တိုက်ခိုက်စော်ကား ပြောဖို့မလိုဘူး…. NLD ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို မေးခွန်းထုတ်ရမလိုဖြစ်နေပြီ…. ” ဟု ဆိုသည်။
မန္တလေး၊ မုံရွာ၊ စစ်ကိုင်း၊ မိတ္ထီလာ၊ ပြင်ဦးလွင်၊ စစ်တွေ၊ လားရှိုး နှင့် ရန်ကုန်အပါအဝင် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ရှိ မြို့များတွင် အနီးအနားရှိ NLD ရုံးများရှေ့တွင် ကန့်ကွက်ကြောင်း ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုများကို လာမည့် တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက် ၉ နာရီမှစ၍ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးဆောင်ဆရာတော်မှ မိန့်ကြားသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် ကြိုလျှင် ကြုံသလို ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဘုန်းတော်ကြီးများကို စော်ကားလေ့ရှိပြီး အစ္စလာမ်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာပြဿနာဖြစ်တိုင်း အစ္စလာမ်ဘာသာဘက်မှရပ်တည်သည့် ပါတီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပါတီအတွင်း မွတ်ဆလင်အများအပြားနေရာယူထားသဖြင့် မစိုးရိမ်တိုက်အုပ်ဆရာတော် အရှင်ဝီရသူမှ ခွပ်ဒေါင်းမဟုတ်တော့ဘူး.. မွတ်ဒေါင်းဖြစ်နေပြီဟု မှတ်ချက်ပေးခဲ့ဖူးပြီး ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံး ထောက်ခံထားသည့် မျိုးစောင့်ဥပဒေကိုလည်း NLD ပါတီမှ ပြည်သူ့ဆန္ဒကို ဆန့်ကျင်ကာ ကန့်ကွက်ထားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။